China Gate Valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Allway Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Gate Valve
Allway သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် China gate valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့် China gate valve ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2005 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် gate valve ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချခြင်းနှင့် လက်ကားရောင်းချခြင်းတို့ကို စတင်ခဲ့ပြီး ထို့နောက် တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၆ နှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်း ၂၀ မှ ၂၀၀ နီးပါး တိုးလာခဲ့သည်။ အမှန်တကယ် တပ်ဆင်ပြီးနောက် အာမခံကာလအတွင်း အမှန်တကယ် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အစားထိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအရ ပိုက်လိုင်းဒီဇိုင်းဖြင့် ဖောက်သည်များအား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Gate valve ဆိုသည်မှာ အပိတ်အဖွဲ့ဝင် (ဂိတ်) လမ်းကြောင်း၏ အလယ်မျဉ်းတစ်လျှောက် ဒေါင်လိုက်ရွေ့လျားနေသည့် အဆို့ရှင်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ Gate valve ကို ပိုက်လိုင်းဖြတ်တောက်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
Gate valve သည် အသုံးများသော valve အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းများကို ဖြတ်တောက်ရာတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။ Gate valves များတွင် အောက်ပါ အားသာချက်များရှိသည်။
(1) Fluid resistance နည်းပါးသည်။
(၂) အဖွင့်အပိတ်အတွက် လိုအပ်သော ပြင်ပအားသည် သေးငယ်သည်။
ကြားခံ၏ စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ကန့်သတ်မထားပေ။
(၃) အပြည့်ဖွင့်သောအခါ၊ အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်သည် stop valve ထက် အလုပ်လုပ်သော ကြားခံဖြင့် တိုက်စားသွားပါသည်။
(4) ပုံသဏ္ဍာန်က အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး ပုံသွင်းနည်းပညာက ကောင်းမွန်ပါတယ်။
(5) ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တပ်ဆင်ရန်နေရာငယ်။
gate valve တွင် မူရင်းဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်သော နည်းစနစ်၊ ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ ပါ၀င်ပြီး ISO9001 နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ကောင်းစွာရောင်းချနေပြီး ရေပေးဝေခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေသည့် နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများစွာသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဓာတ်ဆီဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သတ္တုဗေဒနှင့် အခြားရောင်းဝယ်ရေး။
Unidirectional sealing knife gate valve တွင် ရိုးရှင်းပြီး ကျစ်လစ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း၊ ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ သေးငယ်သောအသံအတိုးအကျယ်၊ ချောမွေ့သောချန်နယ်၊ သေးငယ်သောစီးဆင်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ပေါ့ပါးသော၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ ဖယ်ရှားရလွယ်ကူသည်၊ စသည်ဖြင့် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဘုံတံခါးအဆို့ရှင်၊ flat gate valve၊ globe valve၊ regulating valve, butterfly valve, ball valve အစရှိတဲ့ ဘုံအဆို့ရှင်ရဲ့ အလေးချိန်၊ စီးဆင်းမှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ဧရိယာ ကြီးမားပြီး ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပြီး တပ်ဆင်ရတာကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ယေဘူယျအဖြတ်အတောက်ဖြတ်သည့်အဆို့ရှင်နှင့် ထိန်းညှိအဆို့ရှင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 1.0mpa-2.5mpa နှင့် -29-550â”ƒ ၏လည်ပတ်မှုအပူချိန်အောက်တွင် ပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ Unidirectional Knife Gate Valve ကို ဝယ်ယူရန် ကြိုဆိုပါသည်။
Bidirectional Knife Gate Valve ကို ကိုယ်ထည်၊ disc နှင့် u type sealing strip အပါအဝင် ကိုယ်ထည်၊ disc နှင့် u type sealing strip အပါအဝင် cast steel နှင့် stainless steel ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ2style ဓားတံခါး valve ဟုလည်းလူသိများသည်။ valve body နှင့် lumen တို့ကို grooves များဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး valve body ၏ groove သို့ valve body နှင့် disc များကို ပိတ်လိုက်သောအခါ sealing strip နှင့် sealing strip တို့နှင့် ထိတွေ့ကာ disc အောက်ခြေရှိ valve body ၏ groove နှင့် disc ရှိ၊ seal;ဓားတံခါးအဆို့ရှင်ပွင့်လာသောအခါ၊ အချပ်အပိတ်အချပ်အောက်ခြေနှင့်ဝေးသောအချပ်အောက်ခြေတွင်၊ အပိတ်အချပ်ပ်နှင့် ဓါးဒီဇိုင်းဖြင့် အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ကို ပြားချပ်ချပ်ချပ်များပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဓားတံခါးအဆို့ရှင်ကို တားဆီးနိုင်ပြီး၊ အလတ်စားအနည်များစုပုံလာခြင်း Lumen ၏ကိုယ်ထည်ရှိ grooves များသည် ယိုစိမ့်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အကြွင်းအကျန်မရှိ၊ ပိုက်လိုင်းသန့်ရှင်းရေးသည် အဆင်ပြေသောကြောင့်၊ ထို့ကြောင့် ဓားတံခါးအဆို့ရှင်၏ အလုံပိတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေပြီး valve ကိုပိတ်သည့်အခါ ယိုစိမ့်မှုမှကာကွယ်ပေးပါသည်။ Non-fluted ဒီဇိုင်းသည် th တွင် အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။evalve cavity
Stem Knife Gate Valve တက်လာခြင်း။
မြင့်တက်လာသောပင်မဓားတံခါးအဆို့ရှင်၏ကိုယ်ထည်သည် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်ခံသည်၊ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ယိုစိမ့်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ အလုံပိတ် gasket ဟောင်းနွမ်းမှုနှင့်ပြဿနာများစွာ၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းပိုရှည်သည်၊ ပိုမိုရိုးရှင်းသောထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်သည်၊ အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်အောက်ခြေရှိတံဆိပ်ကိုအသုံးပြုသည်၊ အဆို့ရှင်အပေါက်သည် grooves မရှိဘဲ ယိုစိမ့်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အကြွင်းအကျန်မရှိ၊ ပိုက်လိုင်း သန့်ရှင်းရေးသည် အဆင်ပြေသည်၊ o-rings နှင့် flange sealing မျက်နှာပြင်၊ flange gasket နှင့် ကိုက်ညီရန် မလိုအပ်ပါ၊ ရိုးရှင်းပြီး အဆင်ပြေသော တပ်ဆင်မှု၊ သေးငယ်သော ပွတ်တိုက်မှုကိန်းဂဏန်း၊ အဖွင့်အပိတ် လိုက်လျောညီထွေရှိသော၊ စီးရီးဓါးတံခါးအဆို့ရှင် လုပ်နိုင်သည် စက်မှုအသုံးပြုမှု၏ ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေရန်အတွက် manual၊ လျှပ်စစ်၊ pneumatic၊ လျှပ်စစ် ဟိုက်ဒရောလစ်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်၊ bevel gear drive နှင့် အခြားသော actuators များနှင့်အတူ၊
Non rising stem knife gate valve တွင် ရိုးရှင်းပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဒီဇိုင်း၊ ပေါ့ပါးသော၊ ပစ္စည်းချွေတာမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော တံဆိပ်ခတ်မှု၊ ပေါ့ပါးပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်၊ သေးငယ်သော ထုထည်၊ ချောမွေ့သောလမ်းကြောင်း၊ သေးငယ်သော စီးဆင်းမှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်၊ အဆင်ပြေသော တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြုတ်တပ်နိုင်ခြင်း၊ etc. Gate valves များသည် လည်ပတ်ဖိအား 1.0 mpa မှ 2.5 mpa တွင် လည်ပတ်နိုင်ပြီး အပူချိန် -29 mpa မှ 650 mpa. Knife gate valve disc သည် shear function ဖြင့် seal မျက်နှာပြင်ကို တွယ်ငြိမှုကို ခြစ်ထုတ်နိုင်ပြီး အပျက်အစီးများကို အလိုအလျောက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ စတီးလ်တံခါးများကို တားဆီးပေးသည်။ သံချေးတက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော တံဆိပ်များ ယိုစိမ့်ခြင်း။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Allway Valve ဟုခေါ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့် Gate Valve သည် စျေးပေါသော ကုန်ပစ္စည်းကို ရယူလိုသူများအတွက် ရေပန်းစားပါသည်။ Quotations များနှင့် စျေးနှုန်းစာရင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသော လက်ကားပစ္စည်းများလည်း ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှစျေးနှုန်းချိုသာစွာဝယ်ယူရန်စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ပြည်တွင်းပြည်ပမှမိတ်ဆွေများနှင့်ဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဆအနိုင်ရရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။